थानाको अर्थ–राजनीति- विचार - कान्तिपुर समाचार
फाल्गुन २९, २०७६ चन्द्रकिशोर
थाना जनपद प्रहरीको त्यो इकाइ हो, जुन भुइँतहमा नागरिकको सुरक्षाका लागि नागरिककै सहकार्यमा परिचालित रहेको मानिन्छ । कानुन पालना गराउँदै समाजमा अपराध नियन्त्रण र शान्ति–सुरक्षा बहाल गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको प्रहरीको यो ढाँचा स्वभावैले नागरिक निकटको सुरक्षातन्त्र हो । थाना प्रमुख थानेदार कहलिन्छ ।
नेपाल प्रहरीका विद्यमान संरचनाहरूमध्ये तल्लो तहमा रहेका यस्ता इकाइहरूका विभिन्न नाम र पद हुने भए पनि जनजिब्रोमा ‘थाना/थानेदार’ शब्द बढी झुन्डिएका छन् । थाना क्षेत्रमा थानेदार राज्यको यस्तो प्रतिनिधि हुन्छ, जसमा शासनको सम्पूर्ण छवि प्रतिविम्बित हुन्छ । अहिले बहुतहको निर्वाचन भइसकेकाले जनप्रतिनिधिहरूले तल्लो तहसम्म सरकारको प्रतिनिधित्व गरिरहे पनि थानालाई गाउँ–देहातमा एउटा शक्तिकेन्द्रका रूपमा मान्नेहरू कम छैनन् ।
समाजमा भिज्न सक्ने खुबीका साथ प्रहरीको क्षेत्राधिकार परिभाषित गरिए पनि यो संस्थाबारेको समझ वर्ग, समूह र सामाजिक स्तरपिच्छे बदलिँदै जान्छ । प्रहरीसँग समाजका विभिन्न तप्काका आआफ्नै अपेक्षा हुन्छन् । यसैले थानामा कसको पहुंच र प्रभाव बढी छ, उसले सामाजिक–आर्थिक अवसरहरूमा खेल्न सक्छ भन्ने आमबुझाइ छ । कानुन सबैका लागि बराबर हुन्छ भने त्यो पाउनलाई प्रहरीले सबैलाई समान व्यवहार गरोस् भन्ने अपेक्षा समाजको पीँधमा रहेको वर्गको हुन्छ । प्रहरीको कर्तव्य नै हो, बिनाभेदभाव नागरिकको सहायता र सहयोग गर्नु । प्रहरी नागरिक स्वतन्त्रता र मानव अधिकारप्रति जागरुक हुनुपर्छ र वञ्चित समुदायप्रति संवेदनशील हुनुपर्छ । अर्कातिर, अभिजात वर्ग आफ्नो प्रभुत्व छोड्न चाहँदैन र यो परम्पराको निरन्तरताका लागि प्रहरीतन्त्र उपयोगी होस् भन्ने चाहन्छ । यस्तै परिस्थितिले थानालाई एउटा सत्ताका रूपमा खडा गरिदिएको छ । उसो त अझै पनि भनिन्छ— प्रहरीको तागत जनता हो । तर व्यवहारमा जो प्रहरीको लाठीको समीप छ, उही शक्तिशाली देखिन्छ ।
विकास र शान्ति–सुव्यवस्था अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् । शान्ति–सुव्यवस्थाबिना समाजमा स्थायित्व र स्थिरता सम्भव हुन्न भने, स्थायित्व र स्थिरता नहुँंदा विकास गतिविधि मौलाउन सक्दैनन् । वैधानिक लाठी (प्रहरी) लाई जसले आफ्नो कित्तामा ल्याउन सक्यो, ऊ आफ्नो स्वार्थअनुकूल शान्तिको अर्थ दिन सफल हुन्छ । तदनुरूप स्थायित्व र स्थिरताको खोजी गरिन्छ । यसैले थानेदार कसले ल्यायो भन्ने विषयले अर्थ राख्छ । सत्तारूढ दलका चल्तीका नेताले आफ्नो क्षेत्रमा आफूअनुकूल व्यक्तिलाई रोज्छन् । थानामा को आयोभन्दा कसले ल्यायो भन्ने प्रश्नको जवाफ त्यहाँको जातीय–दलीय समीकरणमा हुन्छ । तराईका बढीजसो थानाको नियति यस्तै छ । चरम राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रहरी संगठनका बहालवाला अधिकारीहरूमा व्याप्त स्वार्थका कारण यो प्रवृत्ति हतोत्साहित हुनुको साटो मौलाउँदै गएको छ ।
सरकारी संगठनहरू समाज वा जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । प्रहरीको पनि अन्य सरकारी संगठनको जस्तै समाजप्रति उत्तरदायित्व त हुन्छ नै, कानुन व्यवस्थाप्रति पनि त्यत्तिकै जवाफदेही हुन्छ । कानुनी राज्य, विधिसम्मत शासन प्रणाली, जवाफदेही र पारदर्शिता सुशासनका आधारभूत अवयव हुन् । समाजमा कानुनी राज चलिरहेको छ भनी निष्कर्ष निकाल्नुअघि थानाको अर्थ–राजनीति ठम्याउनुपर्छ । कुन वर्गले थानाको जयघोष गरिरहेको छ ? भुइँमान्छेमा थानाप्रति कत्तिको विश्वास छ ? जाहेरीको समाजशास्त्र कस्तो छ ? दृढतापूर्वक कानुन कार्यान्वयनमा ल्याएर प्रहरीले कानुनी राज्य र विधिसम्मत शासन प्रणालीको अवधारणा सार्थक तुल्याउन प्रत्यक्ष सघाउ पुर्‍याउन सकिरहेको छ त ? आज पनि थानासँग भुइँमान्छेको निकट सम्बन्ध जोडिन नसक्नुको मूल कारण के हो ? आम मानिसका लागि प्रहरी विश्वसनीय किन छैन ? किन खराब आचरण भएकाहरू थानासंँग घनिष्ठ हुन्छन् ? स्थानीय तहलाई न्यायिक क्षेत्राधिकार दिइसक्दा पनि थाना अझै पञ्चायतीको मियो नै छ, किन ? स्थानीय राजनीतिमा बढ्दो प्रतिस्पर्धा, जातीय टकराव, उदीयमान अवैध आर्थिक अवसरहरूले थानालाई गुरुत्वाकर्षणको केन्द्रमा पारिदिएका छन् । थानामा भने आफ्नो छवि सुधार्ने हुटहुटी पाइँदैन ।
स्थानीय सरकार अस्तित्वमा आएपछि तृणतहमा थाना समानान्तर सत्ताका रूपमा नदेखिनुपर्ने थियो । तर, यसको हैसियत झन् झाँगिँदै गएको छ । कतिपय पालिकाप्रमुखहरूलाई नै लाग्छ, थानालाई नरिझाएसम्म आफ्नो राजनीति चल्दैन । थानाले चाहेमा नयाँ नेतृत्व खडा गरिदिन सक्छ भन्ने धारणा पनि छ । कतिपय उस्ताद थानेदारहरू राजनीतिका नयाँ अनुहारलाई प्रश्रय दिन्छन् र तिनलाई स्थापित पनि गरिदिन्छन् । पहिलेदेखि स्थापित राजनीतिकर्मीमा हैकमको प्रवृत्ति रहने बुझाइ कतिपय थानेदारहरूमा हुन्छ । उदीयमान राजनीतिकर्मीमा भने थानेदारप्रति कृतघ्न भाव हुन्छ । यसैले अधिकारीतन्त्रको सोपानमा उक्लिँदै गएका कतिपयले अझै भुइँतहका यस्ता वफादार राजनीतिक औजारहरूबाट चाकरी पाइरहेका हुन्छन् । कतिपय ठाउँमा थानेदारले नयाँ आर्थिक जोखिम पनि लिने गरेका हुन्छन् । त्यो हो— अनियमित काम गर्ने आँट बोकेका नयाँ खेलाडीलाई ओत दिनु र उसका कारोबारमा साझेदार बन्नु । थाना क्षेत्रमा हुने वैध–अवैध धन्दामा थानालाई नरिझाइकन स्थानीय तगाराहरूको व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन भन्ने गहिरो मनोविज्ञान छ, जसको लाभ स्वत: थानाले पाउने गर्छ ।
क्षेत्रविशेषमा नयाँ थानेदार आएपछि चिहान खोतलिन थाल्छ । विद्यमान शक्ति संरचनामा फेरबदल हुँदै गरेको जनाउ हो त्यो । त्यसैले जिल्लाका सबै थाना समान तहका भए पनि तिनमा गाँसिएको आर्थिक–राजनीतिक हैसियतका आधारमा त्यहाँ कसलाई प्रमुख बनाउने भन्ने कुराको निर्धारण हुन्छ । हाइवे छेउछाउ, बजार क्षेत्र, दुई नम्बरी बाटो भएको सीमाक्षेत्र, अपराधका उर्वर क्षेत्र यस्ता आधार हुन्, जसलाई हेरेर माथिकाले थानाको गुरुत्वको छिनोफानो गर्छन् । माथि पहुंँच भएकाहरू ‘जी, हजुरी’ गर्ने थाना प्रमुख ल्याउनमा आफ्नो साख बढेको ठान्छन् । कतिपय सन्दर्भमा तिनलाई माथिबाटै निर्देशन हुन्छ, फलानो–फलानोलाई नचलाउनू भनेर । यस्तैमा कोही स्थानीय अपराधतन्त्रको मतियार हुन पुग्छन् । कतै–कतै थानाका यस्ता बाह्य घुनपुत्लाहरू हुन्छन्, जो आफ््नो स्वार्थमा तगारा हाल्ने थानेदारविरुद्ध कृत्रिम तनाव उत्पन्न गरिदिने गर्छन् ।
‘थाना’ आफैमा निरन्तर चलिरहने अर्थतन्त्र हो । व्यवस्था फेरिँदै गए पनि एवं प्रहरीको संख्या, प्रशिक्षण र परामर्शको क्रम बाक्लिँदै गए पनि थानाले उत्पन्न गरेको आर्थिकीमा संकुचन आउन सकेको छैन । केही बिचौलियाहरू व्यावसायिक रूपमै त्यहाँ संलिप्त हुन्छन् । बिचौलियाको सहजीकरणबिना थानामा प्राय: पात पनि हल्लिँदैन । यस्तोमा कमजोर तप्काले थानाबाट कसरी न्यायको छहारी पाउन सक्छ ? जो सत्तारूढ घटकनिकट छैनन्, तिनीहरूले दलीय सत्ताको औजारका रूपमा रहेका थानाहरूबाट के अपेक्षा राख्नु ?
प्रहरीको उपल्लो तह वा सिंगो तन्त्रबारे थोकमै कुरा हुन्छ । तर आम मानिसको दैनिकीलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने थानाहरूबारे विमर्श हुँदैन । जबकि भुइँतहमा तत्कालै सम्पर्क गर्न सकिने निकाय भएकाले जनताले प्रहरी संगठनमा आबद्ध रहेर कानुन कार्यान्वयनमा ल्याउने अधिकारीलाई प्रत्यक्ष सरकार भन्ने गर्छ ।
कतिपय थानेदार सामाजिक रूपान्तरणमा सहयोगी देखिएका पनि छन्, तिनले जनविश्वास आर्जन गरेका पनि छन् र कुत्सित मनसायका शक्तिकेन्द्रहरूसँग जुधेका पनि छन् । यही तथ्यले समाजलाई निराशातर्फ जान नदिने पनि हो । तर, थानाबारे आमवृत्तमा रहेको बुझाइलाई उखेल्नु जरुरी छ । कुनै पनि थानेदार शासक होइन, सेवक हो । थानामा जोकोही पनि आफ्नो गरिमाको रक्षा हुन्छ भन्ने विश्वासका साथ छिर्न सक्नुपर्छ । थाना राजनीति गर्ने अखडा होइन । थानाले तब मात्र भुइँतहको पूर्ण विश्वास आर्जन गर्न सक्छ, जबदेखि यो मुखियाहरूको खेतीपाती हुन छाड्छ । प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७६ ०७:५७
फाल्गुन २२, २०७६ चन्द्रकिशोर
उसको नाम विदेशिया हो । देहाततिर बस्छ । दस–बाह्र वर्षको विदेशियाको कामै आफ्नो घरपरिवारलाई सघाउनु हो । दिनचर्या उही— घाँस काट्नु, भैंसी चराउनु । तर ऊ जे काम पनि मन लगाएर गर्छ । तन्मयताले दूध दुहुँदा उसका औंलाहरू यति लयबद्ध हुन्छन् कि, हेर्नेहरू पनि छक्क पर्छन् । ऊ गफ पनि रमाइलो गर्छ । ‘विदेशिया, तिमी स्कुल जाँदैनौ ?’ भनी कसैले सोधे, ऊ तुरुन्त जवाफ दिन्छ, ‘यो त अल्छीहरूको काम हो । जोसंग काम हुँदैन, उही स्कुल जान्छ ।’
उसले पक्कै घरमा यस्तो कुरा सुनेको हुनुपर्छ । ऊ आफू कमासुत (काम गर्ने) भएकामा दंग रहन्छ । त्यही प्रश्न उसका बुबालाई सोधियो भने सोझो जवाफ हुनसक्छ, ‘स्कुल पठाएर के हुन्छ ? पढेर कसले रोजगारी पायो ? पाइयो भने पनि कति पैसा पाउला ?’ थप कोट्याउनुभो भने उनले अगाडि थप्लान्, ‘गुजारा गर्नको लागि जेजति सिक्नुपर्ने हो, त्यो त विदेशियाले घरगृहस्थीको कामबाटै सिकिहाल्छ ।’ तपाईंको अर्को जिज्ञासामा उनले भन्लान्, ‘जुन पढाइ–लेखाइले पेट पाल्ने नौकरी दिन सक्दैन, त्यस्तो पढाइले बरु यस्तो रोजीरोटी चल्ने धन्दालाई हेला गर्न सिकाउँछ ।’ विदेशिया पढ्न थाल्यो भने पहिले उसले घरपरिवारमा गर्दै आएको धन्दालाई छाड्न सक्छ, त्यो काम गर्नुमा आफ्नो गरिमा हराएको ठान्न सक्छ र आफ्ना बुबालाई ‘गंँवार’ ठान्न सक्छ !
गाउँ–देहातमा विदेशिया र उसका बुबाजस्तै मान्छेहरू कम छैनन् । कतिपय यस्ता विदेशियाहरू विदेसिएका पनि छन् । यो कथाले ठूलो आबादीको प्रतिनिधित्व पक्कै गर्छ, जसको जीवनचक्र, अस्तित्वरक्षाका लागि जारी जीवन संघर्ष र जिजीविषासंँग जोडिएको उसको समझदारी अक्षर ज्ञानको आकांक्षी छैन । यो समूह प्रदेश वा समाजको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक संरचना वा सञ्चालनका निम्ति एउटा अभिन्न साझेदार हो । अब यो आबादीले प्रश्न गर्दै छ— लेखपढ किन गर्ने ? यो आबादीलाई बाँच्नका निम्ति स्वयंको परिवार र जिन्दगीले जे सिकाउँछ, त्यो शिक्षाले दिन्छ भन्ने लाग्दैन । विदेशियाको कथा हाम्रो वर्तमानको त्रासदी हो, जसले एकै पटक कैयौं संकटतर्फ संकेत गर्छ । यसले साक्षर नेपालको संकल्पलाई समेत गिज्याउँछ ।
तपाईंका वरिपरि विदेशिया जस्तै पल्टु, सोनफी, बटेसर, इस्माइल हुन सक्छन्, जो स्कुल जान पाएका छैनन् । विद्यालय समाजकै सानो रूप हो । त्यहाँ समाजको कुन तप्का पुगेको छ, कसरी पुगेको छन् वा त्यहाँ पुग्नुलाई कसरी लिइरहेको छ, यसले विद्यार्थी–विद्यालय सम्बन्धलाई देखाउँछ । स्कुल छेवैको बच्चाले पढ्न पाएको छैन, त्यसबाट लाभ लिन सकेको छैन वा पढाइको विरुद्धमा सोचाइ बनाएर बसेको छ भने त्यो कसको असफलता हो ? कुनै तप्काले स्कुल नगए पनि आफ्नो जिन्दगीको गाडी गुडेकै छ भन्ने ठान्नु र स्कुलबाट दूरी राख्न चाहनु त्यो तप्काको मात्र होइन, स्कुल र स्थानीय सरकारकै असफलता हो । स्कुल भनेको समाजसंँग समुदायविशेषको अन्तरक्रिया पनि हो । स्कुलको अवस्था, त्यसबारे जनसामान्यको बुझाइले स्कुलको भूमिका निर्धारण हुन्छ । अब त यसले घरछेउको सरकारको अनुहारलाई समेत प्रस्ट्याउँछ ।
भुइँतहमा व्याप्त यस्तै मनोविज्ञानले विदेशियाहरू वैदेशिक रोजगारीतर्फ धकेलिएका छन् । अभिभावकहरू उमेर बढाएर भए पनि बच्चालाई चाँडो कमाउन पठाउने ध्याउन्नमा हुन्छन् । अरूका त्यही उमेरका बच्चा स्कुल दौडिरहेका बेला आफ्ना बच्चा घरकै काममा लागिरहँदा वा अलि ठूलो भएपछि कमाउन बाहिरिँदा अभिभावक दंग पर्ने मनोविज्ञानको विकास भयो कसरी ? आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण यस्तो तात्कालिक लाभको सोचाइ उब्जिएको हो ? तुरुन्त तृप्त हुने मनोविज्ञानका पछाडि कुन खालको आर्थिक–सामाजिक विन्यासले काम गरिरहेको छ ? भुइँतहमा व्याप्त यस्तो मनोविज्ञानका लागि दोषी को हो ? यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर नखोजेसम्म स्कुलभित्र सिंगो समाजको प्रतिनिधित्व हुन पाउँदैन । एउटा तप्का स्कुलबाट टाढिइरहने परिस्थिति उब्जिरहन्छ ।
विदेशिया जस्ताका बाबुको एउटा चिन्ता जायज देखिन्छ । त्यो हो— लेखपढ गर्न थालेपछि खेतीकिसानीलाई उपेक्षाको दृष्टिले हेरिनु; पढेपछि घरकै काममा सहयोग गर्न लाज मान्न थाल्नु र अहिलेको शिक्षाले रोजगारी दिन नसक्नु । यो अवस्था आयो कसरी ? कसले यसका बारे खोजीनिती गर्ने ? यस्ता बुझाइ रहेसम्म कृषिमा रूपान्तरणको कामलाई मूर्त रूप दिन सकिन्न । मान्छेले सधैं केही न केही सिकिरहेको हुन्छ, आजीविका चलाउन । यसले उसलाई बाँच्ने सामर्थ्य दिन्छ, साहस दिन्छ । हामी जसलाई लेखपढ गराउने भन्दै छौं, उसलाई पनि त्यसै अनुरूप ढाल्नुपर्छ, ताकि उसले त्यो आबादीलाई लेखपढ पनि आजीविकाका लागि जरुरी हुन्छ भन्ने अनुभूति गराउन सकोस् । जबसम्म यस्तो गरिँदैन, हाम्रो बाह्रखरीले त्यो आबादीलाई आकर्षित गर्दैन । साक्षरताको कार्यक्रमले त्यसलाई पहिचान र गरिमा दिन्छ । आफू सार्वभौम भएको अनुभूति दिलाउँछ । के बिर्सनु हुन्न भने, प्रत्येक आन्दोलन अधिकार र स्वतन्त्रतासँंग अनिवार्य रूपमा जोडिएको हुन्छ । त्यस्तो अधिकार र स्वतन्त्रताप्राप्तिको सम्भावनाको ढोका खोल्ने अक्षरलाई त झन् जनआन्दोलनको विषय बनाउनुपर्छ ।
स्वाधीनता र कल्पनाशीलताको सम्भावनाले नै अक्षरहरूलाई अक्षर वा अमर बनाउँछ । जब मान्छे स्वयं पढ्न–लेख्न थाल्छ, तब उसले सोच्न थाल्छ, निर्णय लिन थाल्छ, जुन मुक्तिको दिशामा, दिमागको स्वतन्त्रताको दिशामा ठूलो फड्को हुन्छ । पढाइ–लेखाइबिना पनि कसैले कमाइ त गर्न सक्छ, तर पढेपछि कमाइ थप सुरक्षित हुन्छ । घरकै कामकाजबाट आय आर्जन गर्न पनि पढ्नुपर्छ भन्ने बुझाइ भुइँतहमा विस्तार गर्न जरुरी छ । विदेशिया र उसका बाबुले विभेद र बन्धकीको अर्थ बुझ्छन् र पक्कै त्यसको जाँतोमा पिल्सिन चाहँदैन भने स्कुलसँंग तिनको साइनो जोडिदिनैपर्छ । किनकि सामाजिक–आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरू मात्रै स्कुलबाट टाढिएका छैनन् । कसैले लेखपढमाथि नै किन प्रश्न उठाउँछ भन्ने बुझ्न समग्रतामा यसको केस्रा–केस्रा केलाउनुपर्छ । सरकारले निरक्षरता उन्मूलन गर्न यस्ता भुइँ यथार्थबारे ध्यान दिनैपर्छ ।
अर्को कोणबाट पनि हेरौं । निरक्षरता उन्मूलनका नाममा हामी तिनलाई लेखपढ गर्न सिकाउँदै छौं, जसले जीवनलाई हामीभन्दा बढी बुझेका छन् । जबसम्म स्थानीय ज्ञान, परम्परा र उत्पादनलाई सगोलमै राखेर अहिलेका सरकारी उपक्रम अगाडि बढ्दैनन्, तबसम्म ठूलठूला नाराहरूले सार्थकता पाउँदैनन् । सबै वर्ग र क्षेत्रका बालबालिकाको सामाजिक न्याय, पहुंच र सार्थक प्रतिनिधित्वका लागि समावेशी शिक्षा चाहिन्छ र त्यसको प्रत्याभूति गर्ने प्रारम्भिक जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो । फरक क्षमता भएका बालबालिकालाई छेउकै स्कुलसंँग कसरी जोड्ने र तिनमा हुर्किंदै गरेको भिन्न हुँ भन्ने बुझाइलाई कसरी हटाउने, त्यसतर्फ स्कुलहरूलाई अभिप्रेरित गराउन ढिलो हुँदै छ ।
आफ्नै वरिपरि रोजगारी र उद्यमशीलताका अवसरहरू विकसित गर्न सके गाउँ रित्तिने अवस्थामा कमी आउँथ्यो । तर के भइरहेको छ भने, घरनजिकको सरकार रोजगारमूलक तालिमका नाममा स्थानीय आवश्यकता, माग र सम्भावनामाथि जोड दिनुको साटो कर्मकाण्डी तालिममा अल्झिएको छ । स्थानीय सरकारहरूको सफलता र सार्थकता रित्तिँदा गाउँमा जीवन फर्काउनुमा हुन्छ । अनि पो कृषि संस्कृतिसंँग जोडिएको फागु पर्वका बेला खुसी र समृद्धिको कामनासाथ गाइने ‘सदा आनन्द रहे एही दुआरे, मोहन खेले होरी हो’ ले सही अर्थ पाउँथ्यो । अहिले त फागुका लागि भारत र खाडी मुलुकबाट घर फर्कंदै गरेका अनपढ विदेशियाहरू सामान्य लेखपढ गर्न नजानेकै कारण रोजगारी स्थलमा बेहोर्नुपरेका हैरानीका माझ गाइरहेका छन्—
भइवा रे, हमको मिला धक्का,
हम तनिको न घबराए,
न हुए हम हक्का–बक्का
जोगिडा सारारारा... ...
प्रकाशित : फाल्गुन २२, २०७६ ०८:१०